५ पटक विश्वकप जितेको अष्ट्रेलियासँग भिड्दै भारत, कसले मार्ला बाजी ? – Nidar News
५ पटक विश्वकप जितेको अष्ट्रेलियासँग भिड्दै भारत, कसले मार्ला बाजी ?
काठमाडौँ । विश्वकप क्रिकेटमा आज भारतले अष्ट्रेलियाको सामना गर्दैछ । नेपाली समयानुसार अपराहन्न सवा ३ बजे लण्डनमा सुरु हुने खेलमा आजको गेमलाई निकै महत्वका साथमा हेरिएको छ । भारत र अस्ट्रेलिया दुवैलाई यस विश्वकप जित्नसक्ने टिमका रुपमा हेरिएकोले पनि यो खेल रोमान्चक हुने विश्वास क्रिकेट प्रेमीले गरेका छन् ।
अस्ट्रेलियाले आफ्ना सुरुका दुई खेलमा जित हासिल गरेको छ भने एक खेल मात्र खेलेको भारतले पनि जित निकाल्दै अगाडी बढीरहेको छ । अस्ट्रेलियाले पहिलो खेलमा अफगानिस्तानलाई ७ विकेटले पराजित गरेको थियो भने दोस्रो खेलमा वेस्टइन्डिजलाई १५ रनले पराजित गरेको थियो ।
त्यस्तै भारतले भने यस अघि खेलेको एक खेलमा दक्षिण अफ्रीकालाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो । अस्ट्रेलिया अहिलेसम्म ५ पटक विश्वकप जितेर विश्वकपमा सबै भन्दा सफल देशको रुपमा रहेको छ भने भारतले अहिलेसम्म २ पटक विश्वकप जितेर यो वर्षको दाबेदारका रपमा धेरैले हेरेका छन् । यद्यपी खेल हो आजको खेलमा कसले बाजी मार्छ केही समयमा नै थाहा लाग्नेछ ।
एशेज सिरिज :पाँचाै टेस्टकाे पहिलाे दिन इंग्ल्याण्ड २७१ रन, ८ विकेट !